Staff Nurse | Parami Hospital ﻿
31.1.2019, Full time , Health / Beauty Care
•	နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Diploma in Nursing (or) B.N.Scဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Work location No.(6), (G-10) New Parami Road, Mayangone Township, Yangon.
Company Industry: Staff Nurse
5 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅)နှစ်ရှိရမည်။ •	ဆေးရုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီးအဖွဲ့အစည်း နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့အားကောင်းမွန ...
Our Vision To be the leader in the provision of excellent, holistic and compassionate care not only for Women and Children but also for all adults. To provide pre-eminent healthcare by creating patient-focused, specialized services of premier quality. To deliver services and facilities in social ambience of care and hospitality. To use cutting edge laboratory medicine and imaging systems, not only for Women and Children but also for all ages and both gender. Our Mission To bealeading institution in healthcare not only for Women and Children, but for all adults as well, maintaining the highest internationally accepted standards of medical practice, providing first class quality patient care in an atmosphere of ease, comfort and hospitality. To be the centre of excellence in the provision of the most up-to-date, accurate and reliable advanced diagnostic service, using state-of-the-art technology for patients of all ages.
Nowadays, people in Myanmar are becoming increasingly aware of the importance of comprehensive quality health care and are seeking international standard health services.To meet this need, the Board of Directors (BOD) of Royal Parami Life Sciences Co. Ltd. officially launched Parami Hospital in 2010.In striving to beaCentre of medical excellence, the BOD developed Mission and Vision statements to embodyastrong commitment for providing consistent excellent patient care services and satisfaction, placing safety asapriority. In 2011, Parami Hospital expanded medical care services to include adult medical care and services for men and women, thus becomingamedical Centre to treat all patients. We remain committed to providing superior quality health care inaholistic and compassionate manner. In this age of specialization and rapid advances in medical science and technology, Parami General Hospital has dedicated experienced Specialists to provide excellent patient care usingamulti-disciplinary approach. We have combined innovation and advanced technology with superbly trained health care professionals. We are confident that Parami General Hospital will provide service par excellence and improve the quality of life and well-being for all the people that we serve.
•	Computer အခြေခံနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ •	သူနာပြုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိသူဦးစားပေးမည်။
M & E Incharge
31 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နားလည်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့အားကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေ ...
•	Marketing နှင့်ပတ်သတ်၍ Diploma or Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	Social Media Platform အား ကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၊Media များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Marketing နှင့် ပတ်သက်သည့် � ...
Service Staff (General Worker)
•	Oxygen လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	နေ့၊ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Network Engineer Certified, Practical A+ Certified ဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။
113 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	Marketingလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ၊ဆေးရုံလုပ်ငန်းနှင့်ဆေးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	ကွန်ပျူတာနှင့် Internet & Emailကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရည်မွန်ပြီး၊လူနာများအပေါ်တွင်ကြင်နာယုယစွာဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ညတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
133 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	Security လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Fire Safety အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ သင် တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။
•	ဆရာဝန် လိုင်စင်လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။
•	Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပြီး ဆေးရုံနှင့်ဆေးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်၍အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
195 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	လိုအပ်ပါက ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ HR Staff (Full Time)
•	ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
202 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Service လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းရှိသူများဦးစားပေးမည်။ •	နေ့၊ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
208 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့၊ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Pharmacits (Full Time/Part Time)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်လုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ညတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်လုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့/ညတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Assistant Supervisor (Electrical)
237 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့ /ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	လိုအပ်သော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၊အခြားဝယ်ယူရေးအပိုင်း၊ ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမှုထားသိုခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပိုင်း တွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် စီမံခန့်ခွဲနိုင် ...
244 Days, Full time , Health / Beauty Care
•	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့၊ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	နေ့၊ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
361 Days, Full time , Health / Beauty Care
Staff Nurse Health & Medicine jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Parami Hostipal Health & Medicine jobs Health & Medicine jobs Staff Nurse Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
LEMON Myanmar Jewelry
Store Staff M (2)
Yangon (Rangoon) 244 Days
Yangon (Rangoon) 319 Days
Product Development Staff (Marketing Department) Female (1) Post
FDA Staff (Food & Seafood Product)